जलजले क्षेत्रलाई देशकै एउटा उत्कृष्ट गन्तब्य बनाउन पहल थालियो | Lifemandu
जलजले क्षेत्रलाई देशकै एउटा उत्कृष्ट गन्तब्य बनाउन पहल थालियो
तेह्रथुम । तेह्रथुमको तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई देशकै एउटा उत्कृष्ट गन्तब्य वनाउनका लागि पहल थालिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, संघ र प्रदेशका सांसद, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको पहलमा प्रख्यात तीन जुरेमिल्के जलजले क्षेत्रलाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियान थालिएको हो ।
तेह्रथुमको बसन्तपुरमा आयोजित बृहत अन्तर्क्रियामा तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रको व्यवस्थापन कुन मोडलमा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा वृहत छलफल गरिएको छ । वनमन्त्री शक्ति वस्नेतले यस क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै देशकै उत्कृष्ट गन्तब्य बनाउन मन्त्रालयले ध्यान दिने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रदेश १ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुशियतले पुरानो सोच र ढाँचाबाट माथि उठेर यो क्षेत्रको तिव्र विकासमा प्रदेश सरकारको चासो रहने बताए ।
ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भटटराईले टिएमजे क्षेत्रलाई नयाँ गन्तब्यका रुपमा विकास गरेर जनताको समृद्धिसँग जोड्नका लागि आफूहरु लागि परेको वताए ।
संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमले टीमएमजे क्षेत्रलाई देशकै एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन नयाँ सोचका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
तेहथुमका संघीय सांसद भवानी खापुङले स्थानीयवासीको समृद्धिसँग जोडेर सो क्षेत्रको विकास गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेल,आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्द माझी, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बराम, विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रतिनिधि डा. धनश्याम गुरुङले यस क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ले संविधान संशोधनको प्रतिबद्धतासहित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने पहल थालेको छ ।
प्रदेश नं १ को राजधानी धनकुटा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त
काठमाडौँ, माघ १४ । विभिन्न दलका नेता तथा प्रदेश सदस्यले प्रदेश नं १ को स्थायी राजधानी धनकुटालाई बनाउन पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन लुकाउन थालियो ?
काठमाडौं, ८ साउन । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा भएका निर्णय अडकलेर मात्र सार्वजनिक गर्न थालिएको छ ।